Ku Darso Sawir Muuqaal Muuqaal Muuqaal ah Muuqaalkaaga RSS RSS | Martech Zone
Ku Darso Sawir Muuqaal Muuqaal Qoraal ah Si Aad Uhesho RSS RSS Feed
Sabtida, Juun 5, 2014 Sabtida, Juun 5, 2014 Douglas Karr
Waxaan kor u qaadnay kafaala qaadayaashayada iyo waxyaabaha aan ka kooban nahay dhawaan Taboola, Barxad dhiirrigelin macne leh oo quudinteena laga akhriyo qoraalladuna ay la jaan qaadayaan daabacadaha kale ee khuseeya ee shabakadda oo dhan. Waan ku faraxsanahay xakamaynta xadidan ee qaybinta iyo kharashka halkii horseed ee barnaamijka - oo lagu daray shaqaalahoodu aad bay u fiicnaayeen.
Waxaan u dhaqaaqnay Taboola ka dib markii aan adeegsanay adeeg kale oo si shil ah u baal maray miisaaniyadayada hadana raba inaan ku bixinno $ 10,000 qiimaheedu qaybinta ay na siiyeen. Waxaa laga yaabaa in qaybta ugu doqonsan ay ahayd in qodob ka mid ah qodobada ay rabeen inaan ku bixino kor u qaadista uu ahaa maqaal iyaga ku saabsan! Ummu pe nope.
Faa'iidada kale ee Taboola waxay ahayd inaan ka wada faa'iideysan karno liistada maqaallada joogtada ah ee aan jeclaan lahayn inaan kor u qaadno iyo sidoo kale ka faa'iideysashada quudintayada si aan u sii wadno kor u qaadista qodobbadayada cusub. Aad u qabow runtii. Tani waxay ka dhigan tahay inaan dhiirrigelin karno qodobbada ku saabsan kafaala qaadayaasha, qodobbadayada ugu caansan, iyo sidoo kale inaan xoogaa taraafiko ah ku helno qodobbada ugu dambeeyay.
Si xiiso leh, xitaa haddii aad awood u yeelatid sawirro muuqaal ah gudaha WordPress, taasi ma beddelayso quudinta RSS ee bartaada WordPress si loogu daro kuwa yar yar ee ku jira RSS Feed. Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay farqiga u dhexeeya shaqeynta ee WordPress u baahan yahay inuu saxo, laakiin inta ka horeysa xal ayaa jira!
Ladislav Soukup waxay soo saartay qalab loogu magac daray SB RSS Feed Plus taasi waxay awood kuu siineysaa inaad suul-galeysid boostadaada si sax ah u adeegsato RSS Feed sax ah warbaahinta: nuxurka iyo calaamadeynta xarkaha. Ku rakib oo isku xir qalabka waxaadna qeexi kartaa sawirka iyo sidoo kale xaddid dheeri ah.
Tags: xeroquudinta thumbnailLadislav Soukupcontent mediaku dheji thumbnail quudintarss feedrss feed feed muuqaal ahrss quudiyaan thumbnailthrsnail rsssb rss feed feed oo lagu daray
Waxaad Bixisaa 83 Maalmood Sannadkii Email
Apr 16, 2016 at 10: 11 AM
Xaqiiqdii waxay ahayd madax xanuun in la arko ololaha RSS-to-email-ka iyada oo aan wax sawir ah laga helin sababta oo ah quudinta RSS ma aysan laheyn sumadda lagama maarmaanka ah ee sawirrada laga soo qaado. Sikastaba, waa la bedelay feylasha function.php oo hada MailChimp way jiidi kartaa qaybaha loo baahan yahay iminkana emailada ayaa u muuqda kuwo qurux badan.
Si kastaba ha noqotee, wali sawirada ku jira quudinta RSS waxay u muuqdaan kuwo aad u weyn oo doonaya inay ku cabiriyaan cabir ku habboon. Waxay ubaahantahay inay inbadan raadiso oo xal u hesho arintan.